Tag: podcast kubata | Martech Zone
Tag: podcast kubata
Fireside: Yakareruka Podcast Webhusaiti, Kubata, uye Analytics
Muvhuro, Nyamavhuvhu 28, 2017 Douglas Karr
Tiri kuvhura podcast yedunhu yakanyorwa mune yedu Indianapolis Podcast Studio asi isu hatina kuda kupfuura nedambudziko rekuvaka saiti, kuwana podcast inomiririra, uye nekushandisa podcast feed metric. Imwe nzira ingadai yakave yekugamuchira paSkyCloud, asi isu tiri kuzeza kubva pavakasvika padhuze kuvhara - hapana mubvunzo kuti vachatofanira kuchinjisa yavo yemari modhi uye handina chokwadi kuti zvinorevei kune wese munhu
Simplecast: Shambadzira maPodcast ako Nyore Nzira
China, Kurume 30, 2017 NeChishanu, Kurume 31, 2017 Douglas Karr
Kufanana nevakawanda podcasters, takagamuchira yedu podcast paLibsyn. Iyo sevhisi ine plethora yesarudzo uye kusanganisa izvo zvinoremedza asi zvakanyanya kugadzirisa. Tine hunyanzvi hwehunyanzvi, zvakadaro, saka ndine chivimbo kuti mabhizinesi mazhinji angave nenguva yakaoma kuzadza iyo yese data inodiwa kungoburitsa iri nyore podcast. Kazhinji nguva, mapuratifomu enhaka ane kutorwa kwakadzika kwakadai uye vane chinangwa chakakosha zvekuti kusimudzira ruzivo rwevashandisi chisarudzo chine njodzi zvakanyanya